लघु कथाः बालिको सुचिकार - SangaloKhabar
लघु कथाः बालिको सुचिकार
दशैं नजिकिदै थियो । चंखेलाई कामको चटारो धेरै थियो । भएभरका गाउँका मानिसका कपडा सिउनु छ, भनेर धेरै चिन्ता लागिरहेको थियो । चंखे असल र इमानदार दर्जी थियो । बर्षभरि सबै गाउँका मानिसको बालिमा लुगा सिउने मानिस थियो । यसरी उसको दिनचर्या चलिरहेको थियो । लुगा सिलाएवापत सालमा एक पटक दुई चार मुरी धान भित्र्याउँथ्यो । उसको जीवन सजिलो थिएन । छोरा काले र गोरेलाई भने उसले ससुरालीमा राखेर दर्जी काम सिकाएको थियो ।
यतिका दिन गाउँका मानिसको सेवामा मेरो जीवनको ४५ वसन्त पार भयो । अब मैले केही गरिन भने भोलिका दिन बाँच्न कठिनाइ हुन्छ, भन्ने सोच्यो । सालमा अलिकति आएको धानले कसरी म गुजारा गर्नु, गाउँलेलाई अबम बालीमा लुगा सिउदिन भनिदिन्छु के भन्दा रहेछन् गाउँलेले भन्ने बिचार सोच्यो र काले गोरेकी आमा रूकमिणीलाई भन्यो । बल्ल घैँटामा घामलागेछ, मेरा बुढाको भन्दै रूकमिणी मुसु–मुसु हाँसिन् । मैले त पोहोर सालै भनन बुढा महँगी बढेको छ, भनेको थिएँ मानेनौ ! अब पनि भन्दा हुन्छ भन तर रिसाएर नभन भनिन् । हुन्छ भन्दै चंखेले आफ्नो काम गर्न थाल्यो । दशै पनि नजिकिदै छ भोलि नै गएर सबै गाउँलेलाई भनिदिन्छु भन्यो ।
भोलिपल्ट सबेरै चंखे गाउँतिर लाग्यो । बाटामा उसले साइली फुपूलाई भेट्यो, फुपूले एकाबिहानै आफ्नो भदालाई देखेर कता कान्छा ? घरमा सबै ठिक छ ? भनी सोधपुछ गरिन् । सन्चो बिसन्चो खबर भनी ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो । गाउँमा पुग्यो र हिन्दुस्थाने बाका घरमा पुगेर बिन्ती बिसायो ।
सबै कुरा सुनेर हिन्दुस्थाने बाले ठिकैछ, म सबैलाई तेरो कुरासुनाई दिन्छु भने । मालिक आजै भन्नपाए हुन्थो भन्यो चंखेले । ठिकै छ हिड्न त जाउँ भनी दुबै गाउँका सबै कहाँ गए । हिन्दुस्थाने बासँग चंखेलाई देखेर गाउँले अचम्म परे । चंखेले आफ्नो कुरा राख्यो, गाउँलेहरु यतिका बर्ष केही नभनेको यो दर्जीले आज कत्रो आँट गरेर हिनदुस्थाने बालाई लिएर आएछ भन्दै कानेखुसी गर्न थाले ।
कसैले अब दशैं नजिकिदै छ सबैले तेरो भाग खसि, बोकाको पुच्छर, चामल, चिउरा दिहाल्छन्, के को ठूलो भाग खोज्छस् भनी खिसी गर्न थाले । हिन्दुस्थाने बाले गाउँलेलाई सम्झाई–बुझाई गरेर, अबदेखि चंखेलाई लुगासिलाए बापत मिलाएर रुपैयाँ दिने र चाडपर्वमा लुगाफाटो दिने आपत–बिपतमा सहयोग गर्ने भनी सबैकुरा छिनो फानो गरिदिए । गाउँलेलाई अबदेखि चंखे नभन चङ्ख बहादुर भन भनी राम्रा कुरा सिकाए ।
चङ्ख बहादुर पनि हिन्दुस्थाने बादेखि धेरै खुशी भयो । अब मेरो घर राम्ररी चल्ने भयो, मेरो बठ्याँई सफल भयो भन्ने सोचेर दशैं आयो दशैं आयो भन्दै बाजा बजाउँदै घर तिर हिँड्यो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १६, २०७७ समय: १६:३४:१५